10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa
10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 11/12/2020)
Eoropa mahatonga ka mandevona ny tsy takatry ny saina habetsahan'ny kafe, fa manana ny tsara indrindra fivarotana kafe sy trano fisotroana kafe any Eoropa. Meka mpankafy kafe izy ary tsoriko, be fotsiny fa. Cafe kolontsaina dia varavarankely ho an'izao tontolo izao. Tsy mitady fivarotana kafe mihoatra noho izay vangiantsika tranombakoka mahaliana, tsangambato, tempoly, ary ny fiangonana! Inona no Paris, Vienna, ary Italia tsy hisy ny enviable Cafe kolontsaina?
Ireto ny 10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa!
Kafe sy trano fisotroana kafe mampifandray antsika. Sip sy ankasitrahana izahay, anjara amin'ny mahaliana mponina na olon-tiana, ary miala amin'ny korontana amin'ny fiainana maoderina. Izany no elixir ny vokatra.
Misy an-jatony ny fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa mendrika nitsidika, izao no fantina ny zavatra inoantsika no 10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa:
1. Barcelona: Coffee i Satana Corner
Ity tsena kafe mametraka ny atodiakanga Izy in hipster. Misy tompony ny 25 taona izay tia ny kafe tsaramaso. Efa voafehiny antsakany sy andavany ny kanto labiera ny blends. Hiova izy ireo amin'ny fotoana ka tandremo tsara mba hanontany azy izay amin'izao fotoana izao dia mifangaro.
To mameno tena lehibe ireo brews, isan-karazany dia namboarina tsakitsaky azo vidiana. Mitarika ny seza, hankafy ny varavarankely lehibe izay aoka ny renirano ny mazava sy hijery izao tontolo izao mandeha. Izany no antoka iray amin'ireo fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa.
Art deco dia ny tsara tarehy fomba Cafe Odeon any Zurich. Bohemian mahazatra io nanokatra ny varavarany amin'ny 1910 ary malaza amin'ny maha-fonenan'ny ny mpanoratra, poety, mozika, sy ny manam-pahaizana. Ny sasany amin'ireo mpitsidika malaza indrindra dia ahitana Albert Einstein ary Picasso.
Izany no sekoly taloha Eoropeanina haja avo tafo, Brasserie Fittings, rindrina fitaratra, ary ireo mpiandry mitafy ara-dalàna.
Munich an'i Zurich Lamasinina
Berlin ho any Zurich Lamasinina
Basel ho any Zurich Lamasinina
Vienna ho any Zurich Lamasinina
3. Paris: O Coffeeshop
A Surf-ara-tsindrimandry fivarotana kafe ao Paris no azonao rehefa misy Aussie sy Frenchie manomboka ny fivarotana kafe, any amin'ny iray amin'ireo malaza indrindra kafe kolontsaina adala tanàna eto an-tany. Izany no mahatonga azy eo amin'ny avo amin'ny lisitry ny fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa.
O Coffeeshop tsy handiso fanantenana ny sasany favoris anisan'izany noisettes, satroka, ary fotsy fotsy. Atody Benedict dia showstopper, ka ho azo antoka mba hampiorenana!
4. Vienna: Cafe Schwarzenberg
Vienna manana kolontsaina kafe manan-karena tantara; olona congregating sy nifanakalo hevitra politika, fivavahana, sy ny siansa. Mpanoratra sy mpandinika sipping tonga lafatra ao amin'ny lalina labiera ny filozofia resaka. Tsy niova be ny tonta andro anio ary dia iray amin'ireo toerana tena tsara indrindra any Eoropa fivarotana kafe.
Cafe Schwarzenberg no tsara indrindra fivarotana kafe in Vienna. Tsy nentim-paharazana, tsara tarehy, ary photogenika tanteraka ho an'ny manaraka Instagram lehibe picture, #kafe.
Salzburg ny Vienne Lamasinina
Munich any Vienne Lamasinina
Graz any Vienne Lamasinina
Prague ho any Vienne Lamasinina
5. Brussels: mug
Noho ny orinasa toy ny Mok, Brussels no karama ny toerana eo amin'ny fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa Map.
Ary atsatsiho amin'ny afo ny kafe tsaramaso ny tenany izay midika hoe izany satria ny faran'izay tsara.
Ny sakafo nanompo tao Mok no zavatra rehetra vezetarianina vilia, raha misotro ny matsiro ianao fisaka fotsy, dia afaka tuck ho mamy voa madinika nahandroina, miaraka amin'ny voanjo, paplemosy, ampongabendanitra, ary Vegan yogurt.
Luxembourg ho any Brussels Lamasinina
Antwerp ho any Brussels Lamasinina
Amsterdam ho any Brussels Lamasinina
Paris ho any Brussels Lamasinina
6. Italia: Milano Roastery
Starbucks in Italia? Tsy mahatsapa diso nefa, izany no izy marina. Espresso no fanomezana nomen'i Milan izao tontolo izao sy Milano Roastery mandoa fanomezam-boninahitra izany fomba mahavariana zavaboary.
Izany no antsoina hoe ny teatra ny kafe. Tsy tena manana toerana eo amin'ny fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa lisitra. Io toerana dia fankalazana ny fomba amam-panao sy ny kafe manana nanandrana efitrano 'ny toetry ny ny kanto Roastery. Eritrereto Willy Wonka mihaona kafe.
7. Lisbon: Copenhagen Coffee Lab
The Copenhagen Coffee Lab dia rojo kely sy fandidiana lehibe izay manao onjan-kafe orinasa. Ny fifadian-kanina lasa iray amin'ireo fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa. The Copenhagen Coffee Lab dia mafy nino ny fahatelo kafe onja kolontsaina. Midika izany fa mankasitraka kafe toy ny mpanao asa tanana na asa tanana sy zava-pisotro mazava tsara izay rehetra mahatonga ny fahasamihafana.
Ny tompon'ny Kaffeine nankany Aostralia sy Nouvelle-Zélande, ary nahita ny aingam-panahy ho amin'ny fivarotana kafe fa afaka manokatra in London. Dia tanteraka ny nofy ary dia nanokatra iray amin'ireo tsara indrindra any Eoropa fivarotana kafe.
Toy ny fivarotana kafe indrindra any Eoropa, sakafo dia ampahany amin'ny traikefa sy ny Kaffeine tsy afa. salady, mofo voasesika, ary izay mafana avy ao anaty lafaoro dia eo amin'ny menio.
9. Edinburgh: labiera Lab
In Edinburgh, ny labiera Lab ao fironana ary no iray amin'ireo tsara indrindra any Eoropa fivarotana kafe.
Labs labiera mampiavaka ny olona izay manana ny varavarany banging amin'ny bebe kokoa. Ny kafe sakafo dia fanekena ny fitiavany.
Izany dia manasongadina fiaviana mpitovo efatra miodina Kafe. Roa no brewed teo amin'ny fisotroana labiera roa, ary ny anankiray teo amin'ny fisotroana kafe expresso. Coffee tsiroaroa deliciously amin'ny mofomamy na mofomamy, izay ny labiera Lab dia tsy fahampian'ny.
10. Prague: mifangaro
Modern, mamirapiratra, ary mavitrika, Misto dia tsy maintsy.
Ny anarana hoe Czech for, Ny toerana. Ny kafe manokana dia manan-karena sy ny zava-pisotro sakafo matsiro.
Na inona na inona ny fotoana, sakafo maraina, sakafo atoandro, na sakafo hariva, Misto dia mandray anao amin'ny fomba marina sy ho azo antoka azonao ny kafeinina vahaolana.
Nahafinaritra ny lahatsoratra “10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa”? boky Save A Train ary manomboka ny kafe café kolontsaina dia!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / andehilahy ny / en na / en sy ny maro hafa fiteny.
Cafe Cafe mpitia coffeeculture TravelBrussels TravelLondon TravelMilan travelparis TravelVienna TravelZurich
Best Canal Ary River Boat Holidays In Eoropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Train Travel Belzika, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina
Nandeha lamasinina, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel The Netherlands, Travel Europe